Dyson 360 Eye Vacuum Review - News Fitsipika
The Dyson 360 Eye no tsara indrindra milina manao vacuum misy. Izany fotsiny amin'ny fanadiovana tsara kokoa noho ny olon-kafa rehetra, fa izany ihany koa manana ny downsides.
British madio milina mpanao voalohany vacuum dia mendrika ny miandry, fa vidin'ny be dia be, tsy afaka manao ny tohatra, ary tsy tonga lafatra na dia ny tsara indrindra misy amin'izao fotoana izao
Ity lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Dyson 360 Eye vacuum famerenana: ny milina izay sucks (fa amin'ny fomba tsara)” nosoratan'i Samuel Gibbs, fa theguardian.com tamin'ny Talata faha-9 Aogositra 2016 06.00 UTC
Dyson ny 360 Eye milina farany vacuum madio dia navotsotra tao amin'ny UK taorian'ny fitsarana be dia be tany Japon ary mihambo ny ho tsara indrindra misy. Ahoana no niisa hamely ny tsena tari-dalan'ny Roomba - Ary no tena mendrika ny mividy?
Jereo, habe sy ny Dock
Ny Dock dia tsotra, fotsy tontonana amin'ny Chrome fifandraisana-tongotra nanarona teo, izay mitarika ny milina handidy ny tenany ka. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
The 360 Eye dia sady kely sy lava noho ny ankamaroan'ny milina hafa vacuums. Tena 23cm ny savaivony, izay latsaky ny 12cm ny lehibe indrindra mpifaninana, ny iRobot Roomba 900 andian-dahatsoratra, fa izay koa 12cm lava, izay mahatonga izany 3cm lava noho ny Roomba.
niantsona, tahaka ny ankamaroan'ny mandany ny fotoana, ny 360 Eye maka ny be tsy rihana toerana midadasika kokoa noho ny mpifaninana, izay mahatonga mora kokoa ny miara-miaina amin'ny, ary ny kely kokoa dia midika savaivony dia mety ihany koa ny mahazo an-ary avy tamin'ny mataho- tra banga. Ohatra, ny 360 Eye afaka manenona sy avy amin'ny latabatra sy ny seza tongony tsara kokoa noho ny mpifaninana ka tsy manana ny niisa seza teo ambony ny latabatra tamin'ny voalahatra-madio maraina.
Ny maso mipetraka mirehareha ny ambony ka hanome azy io ho 360-ambaratonga jerena ny tontolo iainana, nefa tsy afaka mahita ny zavatra izay fohy kokoa noho ny milina ny vatana. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
An-tampon-milina manana 360-ambaratonga fakan-tsary, izay mampiasa ny sarintany avy ny trano isaky sy misaina ny tsara indrindra, manadio lalana mahomby indrindra. Ny lahatsary babo ny milina tsy mandao ny milina.
Ny Dock dia tsotra fotsy nijoro amin'ny Chrome ravin amin'ny izay ny milina mitarika handidy. Roa mainty sy fotsy Nalaza efamira manampy ny milina hahita ny Dock, ary niverina ho azy rehefa mila ho ambony ny, izay dia hanao tapaky ny volana madio raha ny manao mihoatra ny iray efitra. Mihoatra tariby azo voatahiry ao amin'ny hery adaptatera, mitandrina azy tsy hatao ninonoanao niakatra teny an-milina.
Fandaharam-potoana sy ny fanaraha-maso
Ny Dyson Link fampiharana ho an'ny Android sy ny iOS mamela lavitra fanaraha-maso, fandaharam-potoana sy ny aretina ny fahadisoan'ny, amin'ny mora-to-fampiasana izany. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
The 360 Eye dia iray amin'ireo voalohany Dyson andalana ny mifandray vokatra, miaraka amin'ny Dyson Cool Link, raha midika hoe ny ankamaroan'ny ny toe-javatra sy ny fanaraha-maso no offloaded ny Dyson Link fampiharana ho an'ny Android sy ny iOS fitaovana.
Afaka Mbola nametraka ny milina fanadiovana mampiasa ny bokotra tokana eo an-tampon'ny, fa ny mandamina fotoana fanadiovana ilainao ny fampiharana. Raha vao nametraka sy mifandray ny Wi-Fi tambajotra - dia nitondra telo miezaka mampifandray azy io araka ny tokony ho ahy (Marina aloha fa tena sarotra) multi-tambajotra nanangana - ny fampiharana afaka mifehy ny milina avy na aiza na aiza, tsy ao an-tokantrano.
Fandaharam-potoana dia ho mora tahaka ny nipaipaika isan'andro, na maka ny fotoana sy andron 'ny herinandro sy ny famaritana azy ho mamerina, na tsia. Ny fampiharana dia afaka mampahafantatra anao voalahatra mialoha ny madio sy ny milina indray mandeha dia vita. Izany koa dia mampiseho anao ny sarintany ny toerana ny milina no mba afaka am-bavany ny fomba mba ho efa nanarona ny misy rihana toerana, izay fanomezan-toky.
Misy vokatra mafy naorina mpitari-dalana ho any amin'ny fampiharana izay mikoriana ny alalan 'ny endri-javatra, izay kely manao, fikarakarana sy Fanamboarana. Misy ihany koa ny safidy mba Dyson manodidina tonga any an-tranonao, ary hametraka izany ho anao.
Ny borosy fisotroana manarona ny tanteraka sakan'ny milina, raha sompanga lalan'ny hanome azy bebe kokoa noho ny kodiarana vahana. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Tsy misy isalasalana ny Dyson 360 Eye no tena lalina ny vacuuming robot misy amin'izao fotoana izao. Tena feno-sakany borosy fisotroana sy mafy suction mitondra loto be kokoa sy tsara vovoka noho ny Roomba. Dyson milaza ny fahitana ihany koa rafitra mahomby kokoa noho ny tsy lafo midona amin-Tsapan'izy modely, izay sarintany ny efitra amin'ny bumping ho zavatra.
Ny lelan-fanadiovana ihany koa fampisehoana tsara kokoa noho ny ankamaroan'ny olon-kafa izay miantehitra amin'ny kofehy borosy amin'ny lafiny, nefa dia tsy mahazo ny zava-drehetra. Toy ny milina hafa rehetra vacuum misy amin'izao fotoana izao, ny 360 Eye dia natao mba hanao ny ampahany ny asa, hanadio isan'andro sy hitandrina an-tampon'ny hanangana ny loto. Dia mbola mila banga iray hafa mba hanadio ny tohatra sy ny tany fa ny milina tsy afaka.
Mijery azy hoe madio mety ho hahakivy. The 360 Eye miolakolaka manaraka ny kianja modely amin'ny 5m efamira. Tsy amboariny mandra-nanohintohina ary avy eo mivoaka ny mameno ny kianja talohan'ny nifindrany tao amin'ny kianja manaraka. Raha ny toerana tsy mamela, toy ny halavan'ny galera lakozia ohatra, dia mifamadika izay mijery toy ny lojika kokoa Zig zag endriky-.
Dia nandray ny Ben ka tapaka ho azy mailaka sy mora, fa mba ho kely pako ary mety tsy maintsy hanaisotra izany tapaky-nandositra raha maloto indrindra karipetra. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Ny milina dia manana sompanga lalamby, fa tsy kodiarana, izay manampy azy handresy ivaiva kely toy ny matevina sy kely rugs molotra ny varavarana. Ny fahitana rafitra misakana ny 360 Eye avy nidona ho zavatra lehibe sy ny rindrina, fa mbola mamely seza tongony sy ny hafa, na kely manify zavatra.
Ny rehetra momba ny tena ambony nifandimby toy ny buffer ho an'ny fiantraikan'ny, izay mitranga mihoatra noho izay mety manantena, fa tsy toy ny maro midona amin-fomba hafa lamba, tsy hiverina sy hamafàny atsangana hanohitra ny surface ary dia toy izany no tsy hanamarika misy marefo vita na fitaovana mety manana.
taorian'ny about 45 minitra ny fanadiovana ny milina miverina ho any ny faladiany tobin'ny handidy, izay maka fotsiny eo ambany 2 ora sy sasany. Ho avy eo mivoaka sy hamita ny potika fa tsy tonga indray mandeha izany nandidy. Raha ny fandehany eny ny suction sy borosy ny bara hidiny rehefa mitondra fiara koa sy ny faladiany toby, ary koa raha nijanona ary miasa avy manodidina ny fomba zavatra.
Ny milina dia angamba fohy ampy antonona eo ho eo ambanin'ny farafara. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
The 360 Maso tsy ny Nangingina ny vacuums ary mafy ampy mba hisorohana anao nandre ny fahitalavitra raha manomboka manadio akaikinao, fa izany ihany koa amin'ny dity mahafinaritra kokoa noho ny ankamaroan'ny olon-kafa. Dyson manao fifanarahana mikasika ny fomba lehibe izany feon-kira ny feon'ny ny Mpitroka ny loto ao mba ho azo zakaina kokoa ary tena mahatonga ny fahasamihafana. Raha ny mahazatra ianao, dia tsy ho eo raha manao ny fanadiovana, na izany aza.
A pop-tontonana eny amin'ny indray dia maneho ny lahatsoratra-maotera sivana, raha ny pre-moto sivana mipetraka ao ambadiky ny Ben. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
raha ny 360 Eye hanao ny vacuuming sy hitandrina ny tenany nandidy, Misy kely ny fikojakojana ilaina. Raha vao iray volana tsy maintsy hanasa ny mialoha sy aorian'ny-maotera sivana, izay mora ny hanesorana ihany – ny anankiray teo an indray ary ny iray teo akaikin'ny Ben – hihazakazaka eo ambanin'ny ny paompy ary aoka maina ny 24 ora.
Ny 0.33L Bin dia tena mora foana. Tsindrio fotsiny ny bokotra eo ambony fanafahana, misintona izany, hampitraka ny sarony, ary mihorohoro any an-pako. A 30 amin'ny ankamaroan'ny asa faharoa.
Manamarina-misakana avy ny borosy toeram Tsotra. Azo unscrewed dia nesoriny avy ny lafiny, fa tsy nahita aho raha ny marina tsy tokony hanao izany, na dia ny kiraro laces izany nihinana.
Fanadiovana iray mihazakazaka amin'ny heverina ho madio karipetra. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Raha very fifandraisana amin'ny aterineto, fandaharam-potoana hita ho somary voa sy Miss
Tsy afaka mahazo miraikitra amin'ny molotra kely na ny zavatra tena mora foana raha toa ka voatery mitodika amin'ny iray
Ny habetsahan'ny loto dia nisintona niala ny heverina ho madio karipetra dia tena mampihorohoro
The 360 Eye Tsy mila mihazakazaka toy ny matetika toy ny sasany mba hihazonana ny fari-madio perceivable
Tsy Ho manao 20 metatra toradroa isan-karazany ny karipetra amin'ny potika ny fanaka sy ny sakana in ambany 30 minitra tsy mila ny fiampangana faharoa
Ilaina ny ho afaka nandroaka momba ny metatra, na dia avy amin'ny Dock mba ho afaka nanomboka ny fanadiovana, izay midika fa tsy maintsy manana lalana maimaim-poana ho mendrika misokatra toerana
Tsy tahaka mahafatifaty toy ny milina hafa vacuums
The Dyson 360 Eye ny vidin'ny £ 800. Fa raha oharina, iRobot ny Roomba 980 amin'ny maso ihany koa ny vidin'ny Fikarohana £ 800, raha midona amin-Fikarohana milina vacuums manomboka amin'ny manodidina £ 150 sy ny.
The Dyson 360 Eye no tsara indrindra milina manao vacuum misy. Izany fotsiny amin'ny fanadiovana tsara kokoa noho ny olon-kafa rehetra, fa izany ihany koa manana ny downsides. Tsy afaka mahazo eo ambany toy ny zavatra maro toy ny Roomba, dia mbola midona amin-ho zavatra manify ary mbola tsy madio ny zava-drehetra, midika fa tsy ny banga ihany no tokony hanana.
Ny dian-tongotra kely dia mahatonga ny fahasamihafana eo amin'ny fahaizany mba ao anatiny sy manodidina latabatra sy ny seza tongony, ary mitaky ny tsy toerana rehefa nipetraka ao amin'ny Dock, izay mahatonga azy ho be mora kokoa ny miara-miaina amin'ny tany tery fisaka sy ny tanan-tohatra.
Robot Mpitroka ny loto ao Natao banga isan'andro, na, fara fahakeliny, imbetsaka isan-kerinandro, izay midika fa avy-ary-avy hery manadio tsy maninona toraka. Ny tapaka tsy mamela izany fanadiovana mahazo ny tena ratsy ambaratonga, ary raha zavatra ianao ranon kokoa hivoaka ny banga ary avy eo sady hamoaka izany, fa tsy hamela izany ho amin'ny milina.
Azonao atao àry ny milaza fa tsy mahavita milina afaka manao ny asa ihany koa, fa ny 360 Maso ihany koa ny tsy tokony hihazakazaka ho toy ny sasany matetika mba hihazonana ny fari-madio perceivable, indrindra satria mahazo bebe kokoa eo amin'ny voalohany hamafa. Tsy mora ihany koa ny hifindra eo amin'ny gorodona mba handrakotra faritra samihafa amin'ny andro samihafa.
Izany vidin'ny be dia be, dia tsy tonga lafatra, ary izany tokoa dia tsy maintsy-mividy ho an'ny olona rehetra. Fa izany no tsara indrindra amin'izao fotoana izao milina vacuum.
Mahatsara: mifanentana amin'ny mataho- tra banga, manadio tsara isaky ny hazakazaka, mahatonga ny feo mahafinaritra kokoa, tsara kokoa lelan fanadiovana, mora ny fikarakarana, tsara fampiharana, tsotra fandaharam-potoana
Maharatsy ny mifampiresaka: tsy tratry ny ananany eo ambany toy ny fanaka be, lafo, tsy ho banga ihany, mitaky ny fahafahana miditra aterineto ho an'ny ankamaroan'ny endri-javatra mihoatra hanoto-bokotra fanadiovana, afaka atao miraikitra toy ny milina rehetra vacuums
The Dyson 360 manana savaivony kely noho ny Roomba 880 sary eto, fa avo kokoa. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
iRobot Roomba 880 famerenana: ny alalan'ny milina azo baikoina banga madio izany efa ho biby
Misakana tanteraka Dyson V8 famerenana: farany, ny cordless safidy ho marina
Best Mpitroka ny loto ao? Ny mitaiza kely izany ka jereo
Article, Dyson Ltd, Gadgets, Famerenana, Robots, Samuel Gibbs, Teknolojia
← Samsung Galaxy Namoaka Ny Note 7 Phablet Afaka mamoha amin'ny masonao Dia ny Fitadidianao Ianao ho marina araka ny hevitrao no? →